Ukungabikho kwiiNkqubo zeNtlawulo ezivela kwi-Google Analytics - Semalt Practice
Kubalulekile ukulandelela umthombo wentengiso ye-intanethi ngokufanelekileyo. Imvelaphi yokuthengiswa kwe-intanethi kunye nokuthengwa kuyimba ebalulekileyo ekufuneka ihlolwe ngabaphathi bezoshishino abanenjongo yokukhuthaza imisebenzi yabo yorhwebo ngokusebenzisa iphepha le-intanethi okanye iwebhusayithi. Ukubeka iliso kwimvelaphi yentengiso ye-intanethi kubalulekile ekuqaliseni ukusebenza kwenkqubo yolwabiwo-mali - дизайнерская мебель кресла. Iimali ezingaphezulu kufuneka zinikezelwe kwizicwangciso zokuthengisa kwi-intanethi ezivelisa ukubuyiswa okuphezulu kunotyalo-mali. Izakhiwo ezidumileyo zokuthengisa i-intanethi ziquka indlela echanekileyo, indlela ye-organic, indlela ehlawulwa ngayo, inkqubo yokudlulisa, kunye nendlela yokuhlaleni.
UMichael Brown, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ukuthengwa kwemveliso kunye neenkonzo nge-intanethi kubandakanya iinkqubo ezininzi. Oku kungaphezulu nje kokubonisa i-website yomthengisi we-intanethi, ngokuchofoza uphawu lokuthenga okanye umnxeba, kwaye ulinde ukuhanjiswa kwemveliso okanye inkonzo. Ukuthengwa kwe-intanethi yinkqubo eyinkimbinkimbi ebandakanya ukubeka i-website kwixesha eliqela kunye nemithombo eyahlukeneyo. Ukufunda ngokufanelekileyo kwewebhusayithi kunye neenkcukacha zokuthenga kufuneka zenziwe ngaphambi kokuba wenze isigqibo sokugqibela.
Isalathiso yindlela apho i-credit isinikezelwa kuyo yonke ishaneli. Ikhredithi inikwe ngokusekelwe kumgangatho wokuguqulwa kweentengiso. Isimiso esingagqibekanga se-Google Analytics sibanika i-100% yemali kwiqhosha langaphambili elingenanto ngqo. Ngoko ke, abasebenzisi bangayifumana iwebsite isebenzisa iqhosha elikhokhelwe ekuqaleni..Nangona kunjalo, xa bezama ukugqiba ukuthengwa kwempahla ngexesha elizayo, banokufumanisa ukuba inkqubo yeGoogle Analytics ibone ukuthengiswa komnye umthombo. Ngenxa yoko le ndlela ikhungathekisa ngomsebenzisi wePay Per Click (PPC).
Kubalulekile ukuba abanikazi boshishini baqonde ubudlelwane obunzima obukhoyo phakathi kweentengiso ezahlukeneyo okanye ezithengiweyo. Abanini-shishini banokufunda ngeziphumo eziqhelekileyo zezicwangciso zobuninzi ezahlukeneyo usebenzisa i-platform ye-Google Analytics. Isicwangciso esilona siphumeleleyo sinoqwalaselo singakunqunywa kalula ngokukhetha imodeli yesenzo esisebenzayo. Inkqubo yokukhetha imodeli engcono iquka inkqubo elandelayo yokuhamba: Ukuguqulwa - Isabelo - Umzekelo wokuThathaniswa - Utshintsho lweModeli. Abasebenzisi bePPC bafanele baqonde ukuba kulula ukubonisa ukuphakanyiswa kwama-50%, ngokusebenzisa inkqubo ye-AdWords, ngokutshintsha nje umzekelo wendlela yokunika umenzi lowo owenza umsebenzi ophezulu wokuthengisa.
Enye into ebalulekileyo yezoshishino kumazwe athile ngamaxesha amaninzi kukubhengezwa kweentengiso kwiqonga elilodwa lokudlulisa. Umthombo wokudlulisa ngokuqhelekileyo uyisango lokuhlawula njengoko kuboniswe kule mizekelo emibini: paypal.com/referral kwaye uhlole.sagepay.com/referral. Imizekelo emibili yokudlulisela imithombo yokuthumela i-spam ngenxa yokuba ibonisa ukuba ukuthengisa akuzange kusuke kwisango. Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kwedatha okubandakanya iwebhusayithi kunye nesango kwenza iprogram yeGoogle Analytics ilandele imifanekiso emibili yemithombo yokuthumela njengendlela yesango lokuhlawula. Lo mngeni ungaphendulwa ngokusebenzisa indlela elula. Umnini-shishini kufuneka asebenzise le nkqubo elandelayo ukuxazulula ingxaki yesango lolawulo: i-Admin - Impahla - Ulwazi lokulandelela - Ukukhutshwa koKhenketho. Inketho yokungafaki imimandla iya kuboniswa. Umsebenzisi uya kukhetha i-icon yokuKhutshwa kokuKhutshwa kokuTyekisa kwaye ukhethe idilesi yesango, umzekelo, paypal.com. Emva kokukhethwa kwesizinda sesango, umsebenzisi kufuneka alondoloze utshintsho. Le nkqubo isebenzayo ngokungabandakanyi isango lokuhlawula. Isiphumo esifunyenweyo kwinkqubo kubandakanya uluhlu lwemithombo yokudlulisa olulula kwaye aluhlanganisi.